ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း BLU VIVO XI +, အကွာအဝေး၏စျေးအသက်သာဆုံးစူပါထိပ် | Androidsis
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကမှကျွန်တော်တို့ဟာသီးသန့်တက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ် BLU စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ၏စပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်တင်ဆက်သည်။ BLU သည်တရားဝင်စပွန်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည့် Mestalla အားကစားကွင်းတွင် Valencia တွင်ကျင်းပခဲ့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခု။
ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်စက်စက်ကိုဆန်းစစ်နိုင်ခဲ့သည် BLU Vivo XI + စမတ်ဖုန်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့အားစွဲမှတ်စေခဲ့သည်။ ထိုအရာ၏ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်။ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်ပြောဆိုရန်များစွာရှိသည်။ BLU သည်သူကိုယ်တိုင်နေရာရရှိရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
1 BLU Vivo XI + သည်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
2 သီးသန့်ဒီဇိုင်း၊ စတိုင်၊ ကြော့ရှင်းမှုနှင့်စွမ်းအင်များစွာရှိသည်
3 အပြာရောင် VIVO XI + box ကို contents တွေကို
3.1 VIVO XI + ၏သေတ္တာထဲတွင်အံ့အားသင့်စရာများနှင့်ပိုများသောအရာများ
4 BLU VIVO XI + အပိုင်းကိုအပိုင်းလိုက်ကြည့်သည်
7.1 selfie ကင်မရာကမပြည့်ပါဘူး
8 « estiiiiiira »ဖြစ်သည့်ဘက်ထရီ
9 သင်၏ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာထက် ပို၍ လုံခြုံသောသော့ရှိပါသလား။
11 BLU VIVO XI + နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များစာရွက်
12 ယူရို ၃၀၀ အောက်မကျသင့်သောအကွာအဝေးထိပ်ဆုံးရှိလား။
13 BLU VIVO XI + ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
BLU Vivo XI + သည်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်း ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်သူများထံမှအမျိုးမျိုးသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။ မြေပြင်အနေအထားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်းတွေမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ Y ရလဒ်ကအရမ်းကွဲပြားခြားနားပါပြီ.
BLU Vivo XI + သည်စားပွဲပေါ်သို့ရောက်ပြီးသူ၏ကဒ်များကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်ပေးသည်။ ဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းပျမ်းမျှအားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတဖြည်းဖြည်း, နောက်ဆုံးပေါ်ဖြန့်ချိအချို့၏ကျေးဇူးတင်စကား, ကအများဆုံးသီးသန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူအန္တရာယ်ရှိသောနီးစပ်သည်။ အရှေ့ Vivo XI + သည်လက်လှမ်းမီသောစမတ်ဖုန်းကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး၏ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်း၏ဝယ်ယူအတွက်မစင်ကြယ်သောငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြသပါမယ်။ သင်နေနေ
သီးသန့်ဒီဇိုင်း၊ စတိုင်၊ ကြော့ရှင်းမှုနှင့်စွမ်းအင်များစွာရှိသည်
အခြားစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအခါ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကတည်းကသိသာသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဆွဲဆောင်မှုအရေးကြီးလှသည်။ ပြီးတော့ကိရိယာကိုသေတ္တာထဲကထုတ်ပြီးမကြာခင်ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ပါပြီ ကျွန်တော်တစ် ဦး ထက်ပိုသော device ကိုရင်ဆိုင်နေရကြသည်မဟုတ်။ အလေးချိန်သည်လုံလောက်ပုံရပြီးထိတွေ့မှုသည်သာယာပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
ကောင်းတာကိုလေ့လာပါ ချောနှင့်လိုင်းများအသေးစိတ်အတွက်ဂရုစိုက် အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုခံထိုက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ထက်မကပေါင်းစပ်ပါကထုတ်ကုန်သည်အောင်မြင်ရန်ကောင်းကျိုးများအားလုံးရရှိသည်။ သတ္တုနှင့်တောက်ပသောအရာသည်ပြန်လာပြီဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှစတိုင်မကျဘဲထွက်သွားနိုင်တယ်၊ VIVO XI + မှာကြည့်ရတာတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းကိုထူးခြားစေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့အပြင်သူကအများကြီးပိုပေးပါတယ်။ ရှိပါတယ် MediaTek Helio P60 ကဲ့သို့အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာ၊ una ကင်မရာနှစ်ခု အများဆုံးခြယ်သအံ့သြဖွယ်နိုင်စွမ်း။ တ ဦး တည်းထိပ်ဆုံးမှ RAM memory နှင့်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သည်မကြာသေးမီအချိန်အထိမဟုတ်ပါ လက်လှမ်းမမီအတွင်း.
အပြာရောင် VIVO XI + box ကို contents တွေကို
သေတ္တာကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းထဲ၌ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမဖွင့်ခင်ကျနော်တို့လေ့လာတယ် အလွန်ပိုင်ထိုက်သော box ကိုတကယ်ကိုအသစ်တစ်ခုနဲ့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုသီးသန့်အမှတ်တစ်ခုပေးတယ်။ ထိုသို့နှင့်အတူတစ် box ကိုဖြစ်ပါတယ် Michelangelo ရဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ် ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်အတော်လေးကြေငြာသည်။ ငါတို့ကြိုက်ခဲ့သည့်အလွန်အောင်မြင်သောအသေးစိတ်တစ်ခုနောက်တစ်ခု
အမြဲတမ်းလိုလိုပင် foreground တွင်စက်၏ကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်ရှိသော်လည်းမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများထက်ပိုသောအရာများလည်းတွေ့ရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့မှာ charger နဲ့ data cable ရှိတယ်, ပုံစံနှင့်အတူ USB အမျိုးအစား C၊ နှင့်အတူတူပင် terminal ကိုနှင့်ညှိတစ်သတ္တုအသွင်အပြင်နှင့်အတူ။ နှင့်အမြန်အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်။ အရာရာတိုင်းဟာပုံမှန်မဟုတ်ပေမယ့်အရာရာတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
BLU ၏သူငယ်ချင်းများသည်၎င်းတွင်ထည့်သွင်းရန် deign လုပ်သည် မျက်နှာပြင် saver ကျနော်တို့ဖုန်းကိုဖွင့်သည့်အခါအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားသည်။ ၎င်းကိုဖန်ထည်မဟုတ်သော်ငြားလည်း၎င်းတွင်နောက်ထပ်ကာကွယ်ပေးသူရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခမဲ့မျက်နှာပြင်ကာကွယ်သူနှစ် ဦး ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့်သူတို့သည်များစွာသောအခြားကုမ္ပဏီများထက်သာလွန်နိုင်သည်။
VIVO XI + ၏သေတ္တာထဲတွင်အံ့အားသင့်စရာများနှင့်ပိုများသောအရာများ
ဒါပေမယ့်ဒီအရာကဒီမှာမပြီးဆုံးသေးဘူး ငါတို့သည်လည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ပိုပြီးကာကွယ်မှုဒြပ်စင် ငါတို့ဖုန်းအဘို့။ အဲဒါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုဆီလီကွန်အင်္ကျီလက်။ တစ်ခုကပွင့်လင်းမြင်သာတယ်၊ နောက်တစ်ခုကိုမီကဂယ်လီလိုရဲ့ပုံရေးတဲ့အလုပ်နဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုကာကွယ်သည့်အပြင်၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားပြီးကွဲပြားခြားနားသောထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။
ပြီးတော့ငါတို့ကိုအပြီးသတ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်အပိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိတ်ပေါ်ကိုအေးခဲစေဖို့။ Blu ကုမ္ပဏီသည်များသောအားဖြင့်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူပါဝင်သည် နားကြပ်အချို့နှင့် VIVO XI + သည်လျော့နည်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းနားကြပ်အချို့လည်းတွေ့ရသည် စမတ်ဖုန်း၏ပုံသဏ္matchာန်နှင့်ကိုက်ညီသောသတ္တုအရောင်အချောသပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပြီးတော့သူတို့မှာအသံအတိုးအကျယ်အတွက်ခလုတ်များနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်တယ်။
သံသယမရှိဘဲနောက်ဆုံးပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအရှိဆုံးပြည့်စုံ unboxing တစ်ခု။ ငါတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများပိုမိုတွေ့ရှိခဲ့မည်မှာသေချာသည်။ အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အကြောင်းပြချက်သည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
BLU VIVO XI + အပိုင်းကိုအပိုင်းလိုက်ကြည့်သည်
ပစ္စည်းတစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုစနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှရှုထောင့်များမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုသည်။ ကနေစ ရှေ့အပိုင်း လှပသောဤစမတ်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ရှိသည် ထောင့်ဖြတ် ၆.၂ လက်မရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်.
၅ လက်မကအတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့တူတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့တွေဝေးကွာသွားတဲ့အခါတိုင်း။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်5လက်မနောက်ကွယ်မှထားခဲ့ပါ။ ကောင်းသောအရာကဒီအောင်မြင်ခဲ့သည် VIVO XI + ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောကိရိယာမလုပ်ပဲနှင့်။ ဖြစ်နိုင်သမျှမှ frames များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ထစ်နှင့်အဘယ်သူမျှမ visors နှင့်အတူကွေးချောနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ကနေကျနော်တို့ကိုရှာပါ 82% ရှေ့ panel ကိုထေို.
ထိပ်မှာကျော်ကြားတဲ့ "မျက်ခုံး" ထဲမှာငါတို့ရှာတွေ့ပါ နီးကပ်အာရုံခံကိရိယာ။ နှင့်လည်း ရှေ့ဓာတ်ပုံကင်မရာ။ ဒီထက်မကမပိုသောကမ်းလှမ်းသောကင်မရာ ၅ megapixels။ ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပြင် 3D True Face ID detect လုပ်ခြင်းအတွက်ဆောင်ရွက်သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သင့်သည်အတိုင်းလုပ်သင့်သည်၊
el en ညာဘက် ငါတို့တွေ့ပြီ အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ elongated button ကို။ ဒါကကင်မရာကိုသုံးတာကခလုတ်တစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ပါဝါခလုတ်ကို နှင့် / သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း။ အရာအားလုံးသည်၎င်းကိုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းသည်ကဒ်အထိုင်နေရာဖြစ်သည်။ ဒီထဲမှာငါတို့မှတက်နိုင်ပါတယ် SIM ကဒ်နှစ်ခု နှင့် micro SD က Memory ကို 128MB အထိတိုးချဲ့ဖို့။
ထိပ်တန်းလုံးဝချောမွေ့သည်။ ဤရွေ့ကား, အဓိကအားကြောင့်ဖြစ်သည် 3.5mm mini jack port ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် နားကြပ်။ အများဆုံးဂန္ထဝင်အသံထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူ dispensing ၏ခြေလှမ်းကိုယူသောအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက။ နားကြပ်များချိတ်ဆက်နိုင်ရန် USB Type C input ကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် adapter ၏အကူအညီဖြင့်အသေးစားဆိုးရွားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး box ထဲရှိဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြားပါဝင်သည်။
အောက်ခြေတွင် charging port ကိုတွေ့ပါတယ်, နှင့်ကျွန်တော်တစ် ဦး connector ကိုဆီသို့ ဦး တည်ပြောင်းလဲဘယ်လိုကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ် C အမျိုးအစား ပိုပြီးခေတ်မီခြင်းနှင့်စွယ်စုံ။ ၎င်းရဲ့အဆုံးမှာအဆုံးမှာသတ္တုဘောင်ကိုယ်နှိုက်ကဘယ်လိုအပေါက်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသည် စပီကာတစ်ခု လက်ျာဘက်၌တည်ရှိ၏။ ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာအလွန်အချိုးကျတဲ့ဗေဒဖြေရှင်းချက်ပါရှိပါတယ် မိုက်ခရိုဖုန်း.
ငါတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် BLU VIVO XI + ၏နောက်ကျော ထွက်ထင်ရှားတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအရာသည် သတ္တုအလွိုင်းပစ္စည်းများများ၏တောက်ပ ငါတို့ဘာရှာတွေ့နိုင်မလဲ။ ကိရိယာပေါ်တွင်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည့်အရောင်နှင့်၎င်းသည်သင့်လက်မှချော်နေသောအမှုမပါဘဲထင်ရသည့်သာယာသောထိတွေ့မှု။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းတောက်ပသောမျက်နှာပြင်များ၏ဆိုးကျိုးဖြစ်သည် ချက်ချင်းခြေရာသတိထားမိပါလိမ့်မည်.
အပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာတွေ့ရတယ် dual- ဓာတ်ပုံကင်မရာကို အရာမလွှဲမရှောင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအိုင်ဖုန်း X. တစ် ဦး ကကင်မရာတွေအများကြီးသတိပေးနေပါတယ် သင့်ရဲ့မှန်ဘီလူးဒေါင်လိုက်နေရာချနှင့်ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ် LED flash ကို။ ပြီးတော့သူတို့က resolution + 16 +5Megapixels ရှိပါတယ်။
ပုံသဏ္ဌာန် ပိုပြီးဗဟိုပြုလက်ဗွေဖတ်စက်တည်ရှိသည်, နောက်ကျောကဲ့သို့တူညီသောသတ္တုပစ္စည်းနှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ကလက်ဗွေစာဖတ်သူကို လျင်မြန်စွာနဲ့မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်ပါနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဗွေကိုပုံမှန်ထက်နည်းသောအချိန်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏တည်နေရာသည်အဆင်ပြေဆုံးနှင့်စီးပွားရေးအရဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်၎င်းသည်၎င်း၏နေရာတွင်ရှိသည်။
VIVO XI + ကိုသင်ကြည့်သောအခါဤသည်ဖန်သားပြင်သည်မျက်စိမမြင်ဘဲအထင်ရှားဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Android အလယ်အလတ်တန်းစားရှိ Terminal အနည်းငယ်သည် ၆ လက်မထက်ကျော်လွန်သော panel ရှိခြင်းကိုဝါကြွားနိုင်သည်။ 6,2 လက်မတစ်ထောင့်ဖြတ်နှင့်အတူ ၎င်းသည်အကွာအဝေးအတွင်းအကြီးဆုံးမျက်နှာပြင်ရှိသောစမတ်ဖုန်းများ၏ထိပ်တွင်ရှိသည်။
ပြီးတော့ဒီအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့စက်ကိရိယာတစ်ခုမှာဒီအရွယ်အစားရှိတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ပုံသေနည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ သငျသညျပွုသည်အထိရှေ့ panel ကိုအများဆုံးလုပ်ပါ လုံးဝနီးပါးမဟုတ်သောဘေးထွက် visors။ နိမ့်ဆုံးမှနိမ့်စွန်းကျဉ်းမြောင်း။ မျက်နှာပြင်အထက်အဆုံးသို့ရောက်အောင် Notch ကိုသုံးပါ။ ငါတို့ပြောတာ ၈၀% ထက်ပိုသောရှေ့မျက်နှာစာနေရာသည်.
Display ကိုကြည့်လျှင် VIVO XI + သည်a1080 X 2246 resolution, ပြည့်ပြည့်ဝဝ HD + နှင့် ရှုထောအချိုး 18: 5: 9။ မျက်နှာပြင် LCD IPS အလွန်မြင့်မားသောအတူ တစ်လက်မလျှင် 402 Pixels ၏သိပ်သည်းဆ။ ဘောင်အတွင်းထည့်သွင်းခြင်းသည်ပိုမိုချောမွေ့စေရန်အတွက်၎င်း၏အစွန်အဖျားရှိအစွန်အဖျားများကိုကွေးထားသည်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုခံကာကွယ်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိသည် Corning Gorilla Glass ကို 3.
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သော resolution နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သင်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်များထပ်မံလိုအပ်ပါသလား။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင် BLU VIVO XI + ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
BLU VIVO XI + သည်ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အချက်တစ်ချက်စီတွင်ထပ်မံပေါင်းထည့်သည်။ အတွင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီအပိုင်းကချွင်းချက်မဟုတ်တော့ဘူး။ ကျနော်တို့မြင်ရတာအရမ်းကျေနပ်ပါတယ် စျေးကွက်တွင်ယူရို ၃၀၀ မရောက်ရှိနိုင်သောစမတ်ဖုန်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည် မည်သည့်ကုမ္ပဏီ၏မဆိုထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းနှင့်သင့်ကိုသင့်ထံမှယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောမျိုးဆက်သစ်များ။
မကြာသေးမီအချိန်အထိ4GB RAM ကမ်းလှမ်းသောစမတ်ဖုန်းရှိခြင်းကံကောင်းသူအချို့အတွက်သာသီးသန့်ထားရှိသည်။ သီးသန့်ဖုန်းများမည်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်မဆို ၀ ယ်ယူနိုင်သူများ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ, ငါတို့တွေ့ရှိသောအင်္ဂါရပ်များ, ဥပမာ VIVO XI + ၌အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိပါတယ်။
BLU VIVO XI + ကိုပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်, အစွမ်းထက်နှင့်ကောင်းစွာဗီတာမင်နှစ် ဦး စလုံး။ ကျနော်တို့ပေါင်းစပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် သိုလှောင်မှု4GB နှင့်အတူ 64 GB RAM ကို။ သို့မဟုတ်အတူပို။ ပင်အစွမ်းထက်တ RAM6GB နှင့် internal memory 128 GB။ ငါတို့ပြောသကဲ့သို့, မကြာသေးမီကမကြာသေးမီက high-end နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၌နေသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်မရနိုင်ဘူးသလိုပဲကြောင်းကိန်းဂဏန်းများ။
ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအံ့ work စရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ငါတို့မှာရှိတယ် MediaTek Helio P60။ တစ် ဦး က Processor ကို configuration နှင့်အတူ Octa-core4x 2.00 GHz ARM Cortex A73 +4x 2.00 GHz Cortex A53။ Oppo, F9 နှင့် F9 Pro အသစ်များ၊ Nokia၊ X5 မော်ဒယ်နှင့်အတူအခြားကုမ္ပဏီများအကြားတွင် Oppo ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောချစ်ပ်တစ်ခု
ဂရပ်ဖစ်၏အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်။ ကျနော်တို့ကိုရှာပါ ARM Mali G72 MP3 700MHz GPU။ စွမ်းရည်ကိုပြသသောကဒ် တုန့်ပြန်မှုရှိသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှအများဆုံးရရှိရန်။ အလွန်မြင့်မားသောအသင်းတစ်ခုသို့ရေခဲထည့်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖြည့်စွက်ချက်မှာသေချာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် BLU VIVO XI + ကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးအလိုက်အပိုင်းအလိုက်အပိုင်းများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံအပိုင်းသို့သွားသည်။ အစမှာနင့်ကိုပြောပြီးပြီ နောက်ကင်မရာနှစ်ခု။ LED flash အထက်တွင်ဒေါင်လိုက်လိုက်ဖက်သည့်မှန်ဘီလူးများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမျဉ်းကြောင်းသုံးခုကိုဖန်တီးသည်။
ကျနော်တို့ပူးတွဲဆုံးဖြတ်ချက်များအကြောင်းပြောဆို 16 Mpx +5Mpx, အသီးသီး။ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အရောင်များကိုအံ့အားသင့်စေသည့်ဓာတ်ပုံများကိုပေးစွမ်းနိုင်သောပေါင်းစပ်မှု။ The PDAF လေဆာအာရုံစိုက်နည်းပညာ တစ်ခုချင်းစီကိုဖမ်းယူ၏အဓိပ္ပါယ်အမှန်တကယ် resolution ကိုအဆင့်အထိရောက်ရှိစေသည်။
ငါတို့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ မြောက်မြားစွာဓာတ်ပုံစမ်းသပ်မှု အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီတွင် VIVO XI + ကင်မရာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရန်။ ဒီပုံမှာငါတို့စစ်ဆေးတယ် အသေးစိတ်မြင့်မားသော, နှင့်ပုံသဏ္andာန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အရိပ်ကွဲပြားခြားနားသည်
တစ်ဦးအတွက် ညအလင်းရောင်နှင့်အတူရိုက်ချက် ၎င်းသည်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အာရုံခံကိရိယာများသည်မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်တွင်ရှင်းလင်းစွာအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုအများဆုံးခံစားကြရသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာငါတို့ဘယ်လိုနေဆဲကြည့်ပါ လမ်းလျှောက်နေစဉ်ဓာတ်ပုံရိုက်နေ, အလုံးစုံအောင်မြင်နေစဉ်ကင်မရာလျင်မြန်စွာအာရုံစူးစိုက်နိုင် အလွန်လျောက်ပတ်သောရလဒ်.
အောက်ပါဓာတ်ပုံတွင်ကြည့်နိုင်သည် ငါတို့ရရှိသောအတိမ်အနက်သည်အမှန်ပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမျဉ်းကြောင်းနှင့်၎င်းပြသထားသောကောင်းကင်ပြာနှင့်မည်မျှကွာခြားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည် ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံး.
အရောင်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ညနေခင်းအလင်းသည်လည်းရရှိရန်အတွက်အတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ ပုံစံမျိုးစုံ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ပင်အဝေးဆုံးအရာဝတ္ထု၌တည်၏။
El ပုံသဏ္modeာန် Apple သည်အသုံးပြုသူများကိုဤဖမ်းဆီးခြင်းအမျိုးအစားကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပြီးနောက်၎င်းသည်အအောင်မြင်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလွန်ကွဲပြားသောရလဒ်များဖြင့်ပေးသောစမတ်ဖုန်းများစွာကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ VIVO XI + နှင့်ရိုက်ယူသောဖမ်းယူမှုကိုကြည့်ရှုသည် အလွန်ပျော့ပျောင်းသောမှုန်ဝါး အရာအဓိကအရာဝတ္ထုကိုမီးမောင်းထိုးပြ မယုံနိုင်လောက်အောင်ရလဒ်များကိုသည်.
ငါတို့ကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ နောက်ခံအလင်းစနစ်။ ကင်မရာအများစုသည်အရောင်မရှိဘဲ silhouette များကိုသာထုတ်ယူနိုင်သည့်အခါ။ သင့်ရှေ့မှနေနှင့်အတူရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံတွင် BLU VIVO XI + ကင်မရာသည် ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်နိုင်စွမ်း နောက်တဖန်
ရှေ့ကင်မရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် BLU သည် VIVO XI + တွင်ဓါတ်ပုံအပိုင်းကိုမည်သို့အလေးအနက်ထားသည်ကိုကြည့်ပါ။ 16 Mpx ရှိတဲ့ကင်မရာတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်ကင်မရာသည်နောက်ကင်မရာတစ်လုံးနှင့်တူညီသည်။ စမတ်ဖုန်းများစွာထက်ဓါတ်ပုံများအတွက်အရည်အသွေးသည်သူတို့၏အဓိကကင်မရာများတွင်ပေးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ရှေ့ရှေ့ကင်မရာမှာလည်းဖြစ်သည် နည်းပညာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ selfies ကကြွင်းသောအရာမှထွက်လာတယ်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအလင်းရောင်မြင်ကွင်းများအတွက်ရှေ့ကင်မရာသည် ၄- ဆဲလ်နည်းပညာပါရှိသည်။ ဤသည်ဖြစ်နိုင်သောစေသည် အာရုံခံယူနစ်တစ်ခုတွင်4pixel ပေါင်းပြီးအလင်းပမာဏ4ကိုမြှောက်သည် ကဖမ်းယူနိုင်စွမ်းကြောင်း။
အကယ်၍သာ နည်းနည်းလေးဖြစ်ပုံရလျှင်၊ အုပ်စုလိုက် selfie mode။ အဆုံးသတ်ပုံပျက်နေသောပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ မေ့ပါ။ 120º၏ကျယ်ပြန့်ထောင့်နှင့်အတူ ရှေ့ကင်မရာဖြင့်ရရှိသောရလဒ်သည်မှန်ဘီလူး၏အရည်အသွေးကိုသင့်အားလျစ်လျူရှုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဓာတ်ပုံအတွေ့အကြုံသည်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိရန်ကောင်းသောလျှောက်လွှာရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါ BLU ယောက်ျားတွေလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ ငါတို့ရှာတယ် ပစ်ခတ်မှု Modes အမျိုးမျိုး သမားရိုးကျတ ဦး တည်းအပြင်။ သူတို့တွင် အလှအပပုံစံ, နောက်ခံအလင်း, မြင်ကွင်းကျယ်နှင့်တစ် ဦး စပ်စုလမ်းပင် "Facemoji" အဲဒါကငါတို့ကိုကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေနဲ့ကာတွန်းကားထားတဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ Emoticons တွေဖြစ်လာတယ်။
ဒါ့အပြင်တိုက်ရိုက်, ငါတို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် Time lapes၊ နှေးနှေးနှေးကွေးနေသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းကို GIF သို့ပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကို "LivePhoto" စနစ်ဖြင့်အသက်ဝင်စေပါ၊ သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်မပါလဲ၊ မှတ်တမ်းများကိုစကင်ဖတ်ရန်ကင်မရာကိုသုံးပါ။
ဖြစ်နိုင်ခြေကကြီးမားတယ်၊ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကသူတို့ကိုသုံးတာကအရမ်းကောင်းတယ်။ တစ်ချက်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာ၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိမုဒ်ကို ရွေးချယ်၍ တိုက်ရိုက်ရိုက်နိုင်သည်။ BLU VIVO XI + သည်မင်းကိုဖမ်းစားပြီးပြီလား။ ဤနေရာတွင်ကလစ် နှိပ်၍ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ဝယ်ပါ။
« estiiiiiira »ဖြစ်သည့်ဘက်ထရီ
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ စမတ်ဖုန်းအားလုံးဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြောင်းအလဲတွေထဲကတစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အကျပ်အတည်းအားလုံး၏ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုလိုပါသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု။ ယင်းအစားပကတိရှုထောင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ၎င်းသည်၎င်းတို့အားထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြီးမားသောဖန်သားပြင်များကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံးထုတ်လုပ်သူများကထောက်ပံ့ဖို့ရွေးချယ်ပါပြီ ပိုမိုမြင့်မားစွမ်းရည်ဘက်ထရီ။ တစ် ဦး ကပညာရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်, ဒါပေမယ့်များစွာသောကိစ္စများတွင်မလုံလောက်။ ဘက်ထရီ၌ဤတိုးပိုပြီးမပါဘဲတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူးကတည်းက။ ပိုမိုကြီးမားသောဘက်ထရီသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုမိုဆိုလိုရန်အရေးကြီးသောအခြားအရေးပါသောအချက်များရှိသည်။
BLU VIVO XI + တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာပါ ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီ။ တူညီသောအကွာအဝေးရှိအဘယျသို့ဆိပ်ကမ်းနှင့်အညီတစ် ဦး ကစွမ်းရည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေပုံကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ ဒီဘက်ထရီကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန့်နိုင်တယ်။ ကိုအသုံးပြုခြင်း VIVO XI + ကိုအပြင်းအထန်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားသည် ပြproblemsနာမရှိဘဲတစ်ရက်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲထက်ပို.
ဤရလဒ်များကိုပို့ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုသည်မတော်တဆမဟုတ်ပါ။ အဲဒါပြတယ် operating system နှင့်အတူ device ကိုတက်စေသောသောသူအပေါင်းတို့သည်ဒြပ်စင်များ၏ optimization ၏လယ်ပြင်၌ကြီးစွာသောအလုပ်ရှိသေး၏ အသုံးပြုခဲ့သည်။
BLU သည်ဥပမာအားဖြင့်ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အရေးကြီးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပေါ့ပါးသောကိရိယာများရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အထူးသဖြင့်ပါးလွှာမှုကြောင့်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊
အရာအားလုံး breakneck မြန်နှုန်းသွားသောတစ်ရက်မှနေ့ရက်ကာလ၌, အချိန်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ဘက်ထရီအားသွင်းဖို့ VIVO XI + ဟာတစ်နေ့တာရဲ့ ၁/၄ မလိုအပ်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနည်းပညာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ၂ နာရီခွဲလောက်ကြာတဲ့ ၁၀၀% အားသွင်းလို့ရတယ်.
ဒီတော့သေးသေးသေးသေးတွေမရှိတော့ဘူး၊ နောက်ဆုံးပေါ် BLU မော်ဒယ်၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ မင်းဖုန်းကိုကေဘယ်ကြိုးတွေမပါပဲအားသွင်းနိုင်တယ်။ Qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ရှိသည့်အားသွင်းစက်တိုင်းသည် BLU VIVO XI + ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းရန်အနည်းငယ်သာကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာတွင်သေတ္တာထဲမပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သာသိရမည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာထက် ပို၍ လုံခြုံသောသော့ရှိပါသလား။
လုံခြုံရေးကဏ္တွင် VIVO XI + ၏နောက်ထပ်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ကိရိယာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်း၏နောက်ဖက်တွင်လက်ဗွေဖတ်စက်ရှိသည်။ ဒါဟာရှေ့နောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်ညွှန်းကိန်းသည်သဘာဝသို့ရောက်ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုနေရာချရန်အကောင်းဆုံးနေရာကိုအမြဲပြောလေ့ရှိသည်။
တစ် ဦး ကလက်ဗွေစာဖတ်သူကို ဖုန်း၏ကျောဘက်တွင်ပစ္စည်းများနှင့်အရောင်များကြောင့်အလှအပကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားသည့်အပြင်။ အရမ်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်သည် ၎င်း၏အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးနည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သို့သော်အဘယ်အရာကိုတကယ်တက်အဆင့်ဆင့် လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာရှိတယ်။ ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 3D True Depth Face IDကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တစ်ခုမှားယှငျးနိုငျစနစ်။
အချို့သောသင်တို့၏မျက်နှာရှာဖွေရေးစနစ်သည်မည်မျှရယ်စရာကောင်းသည်ကိုတစ်ခါတစ်ရံသင့်အားပြောပြပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည့်အခြားဆိပ်ကမ်းများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင် ၄ ခုနှင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲပင်သော့ဖွင့်နိုင်သည်။ ဤအရာသည် VIVO XI + ဖြင့်သင်၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီ BLU ရှိသည့်နည်းပညာသည်ဖြည့်ရန်မရှိ။ မျက်နှာကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့လုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုမြင်တော့မကြာခင်မှာပဲငါတို့တွေ့ပြီ။ ဒီစနစ်ကခေါင်းကိုက်ရုံသာမဟုတ်ပါကျနော်တို့ကအခြားကိစ္စများတွင်မြင်ကြပြီအဖြစ်။ ဒါဆိုငါတို့မျက်နှာကိုလှုပ်ရှားရမယ် မျက်နှာ၏ "မြေပုံ" လုပ်ဆောင် နှင့်သော့ဖွင့်အပြည့်အဝထိရောက်သောကြောင်း။
အသံအပိုင်းကနေကျနော်တို့ကဒီကဗျာသို့မဟုတ်ထူးခြားသောကြောင်းအနည်းငယ်သာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ VIVO XI + တွင်ရှိသည် ကိရိယာ၏အောက်ခြေတွင်ထိုင်သောစပီကာတစ်ခုတည်း။ ဒါဟာperfectlyုံယင်း၏မစ်ရှင်ကျေနပ်အောင်နှင့် လက်ခံနိုင်သောအသံပမာဏဖြင့်သန့်ရှင်းသောအသံကိုပေးသည်။ ဖြစ်ကောင်း၎င်း၏တည်နေရာအရှိဆုံးစံပြမဟုတ်ပါဘူး။
ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်၍၊ Android ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းရှိသည်ငါတို့ရေတွက် စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်အတူ။ BLU သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် brushstroke ကို Android သို့ထပ်ထည့်သည် settings နှင့် configuration ကိုအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမ access ကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွှာတစ်ခုထက်မကျော်လွန်ပါ။ ဥပမာရေဒီယိုကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်မည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များထပ်ပေါင်းထည့်သည်။
BLU VIVO XI + နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များစာရွက်
ပုံစံ တိုက်ရိုက် XI +
Processor ကို MediaTek Helio P60 သည် 2.0 GHz octacore
ဖန်သားပြင် ၆.၂ လက်မ Full HD + မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း Gorilla Glass 6.2
နောက်ကင်မရာ dual-16 Mpx +5Mpx
ရှေ့ကင်မရာ 16 Mpx
RAM ကို4GB ကို / GB ကို 6
သိုလှောင်မှု 64 GB ကို / GB ကို 128
မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အထိုင် ၂၅၆ GB အထိ Micro SD ဖြစ်သည်
မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု ဟုတ်သည် 3D True Depth Face ID
ရှုထောင့် 75.5 155 7.8 မီလီမီတာ
ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အတူ 3.050 mAh
စြေး € 299.00 / € 349.00
ဝယ်ယူ link ကို BLU LIVE XI +
ယူရို ၃၀၀ အောက်မကျသင့်သောအကွာအဝေးထိပ်ဆုံးရှိလား။
BLU VIVO XI + ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း အရမ်းဟုတ်တယ်။ ငါတို့မှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာငါတို့မြင်ခဲ့ရပြီ 16 Mpx +5Mpx Dual Camera ကြောင်းအလွန်ကျေနပ်ရလဒ်များကိုပေးထားပါတယ်။ သိုလှောင်ရန် RAM နှင့်သိုလှောင်မှု။ အများဆုံး "ထိပ်တန်း" အမှတ်တံဆိပ်၏ခံထိုက်သောတစ် ဦး ကဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ချော။
ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system နှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏အကောင်းဆုံးကိုကြည့်ပါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမှတ်အသားများကိုရရှိသည်။ သူ့ 3.050 mAh ဘက်ထရီ ၎င်းသည်ဘက်ထရီများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည်ရှိသော်လည်း အတိုချုပ်ပြောရလျှင် BLU သည်အလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်တွင်ဆူညံသံထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လျှို့ဝှက်ချက်သည်လွယ်ကူပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုလှပသော terminal တွင်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။
BLU သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကစပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိခဲ့သည် အမေရိကန်တိုက်ကြီးအတွက်ရှည်လျားသောအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်။ အမေရိကန်စျေးကွက်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာစုစည်းမှုအပြီးတွင်ပစ္စည်းများကိုသူတို့၏လေယာဉ်များအားဘောလုံးမှတစ်ဆင့်အသံလွှင့်ခဲ့သည်။ နှင့်ဌငါတို့တွေ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သောကိရိယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါးစပ်တွင်အရသာကောင်းတစ်ခုကျန်ခဲ့သည် များစွာသောအသုံးပြုသူများအကြား။
ယခု အသစ် VIVO XI + နှင့်အတူအရေးပါသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည် နှင့်ထိပ်တစ် ဦး ပြောင်းကုန်ပြီ။ တူညီတဲ့အကွာအဝေးရှိရာပေါင်းများစွာသောစမတ်ဖုန်းများကြားတွင်ထင်ရှားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည် မည်သည့်နှင့်အတူမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နိုင်စွမ်းစက်ကိရိယာ အခြား လက်ရှိစျေးကွက်၏။ ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်း၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကထုတ်ကုန်လေးဘက်စလုံးမှာအရည်အသွေးမြင့်လာတာကိုတွေ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က BLU ပုံစံကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင် ဘလူး R2သူတို့ကအလားတူလိုင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်, ပြောင်းလဲမှုသိသာကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားသည် အသုံးပြုထားသည့်ပစ္စည်းများနှင့်ကင်မရာနှစ်ခုကဲ့သို့အပိုဖြည့်စွက်မှုများသည် BLU ကိုရှေ့တန်းတွင်ထားရှိသည်။
BLU VIVO XI + ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
La ဓာတ်ပုံကင်မရာ ငါတို့အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးသောအခြေအနေအားလုံးတွင်ကောင်းမွန်သည်။
နေ့ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု ဒါဟာတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ လုံခြုံသင့်တယ်၊
La RAM နှင့်သိုလှောင်နိုင်စွမ်း သူတို့ကအလွန်အစွမ်းထက်တွဲဖက်ပါစေ။
6 GB RAM + 128 GB ROM ကို
La သတ္တုမျက်နှာပြင် တောက်ပ ၎င်းသည်ခြေရာများအတွက်အမှန်တကယ်သံလိုက်ဖြစ်သည် ချက်ချင်းညစ်ပတ်တယ်။ ထားရှိသောအကာအကွယ်အဖုံးများနှင့်အတူဖြေရှင်းပြီးသောအရာတစ်ခုခု။
ငါတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းထောက်ခံမှုကိုချစ်ပေမယ့် ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ထဲသို့ထည့်သွင်းမထားပါ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
Gorilla Glass3မျက်နှာပြင်ကာကွယ်မှုသည်နည်းနည်းလေးခေတ်နောက်ကျနေသည် ဒီကာကွယ်မှု version6အဘို့ဖြစ်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားယူပြီး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » BLU VIVO XI + ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
Xiaomi Mi 10.1 နှင့် Mi 8 Explorer တွင်တည်ငြိမ်သော Android Pie ဖြင့် MIUI 8 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။